बोट जुन विकी लेख र ndash लेख्छ; सेमील्ट विशेषज्ञ
तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ कि एक दिनमा 15,000 लेखहरू लेख्न सक्दछ वास्तविक छैन, तर यो सम्भव छ कि स्वीडेनको लागि सभरकर जोहानसन भनिन्छ। इवान कन्वोलोभो, सेल्टल्ट विशेषज्ञ, भन्छिन् कि यो व्यक्तिले सफलतापूर्वक कम्प्यूटर प्रोग्राम सिर्जना गरेको छ जुन लाखौँ लेख लेख्न सक्छ। उनले 2.7 मिलियन विकिपीडियाका लेखहरूमाथि लेखे र उनको भारी कामको साथ संसारलाई आश्चर्यचकित गरे। वाल स्ट्रीट जर्नलको अनुसार, जोहानसनले संसारको सबैभन्दा प्रख्यात लेखक बन्यो, र उनका योगदानहरूले 8.5 प्रतिशत विकिपीडियाका लेखहरू गरेका छन्।
कैसे बोट्स धेरै लेख लेख सकते हो?
जोहानसनको अनुसार, उनको बट प्रति दिन सयौं विकिपीडियाका लेखहरू लेख्न सक्षम छन्। उहाँ सिविल ईन्जिनियरिङ्, भाषाविज्ञान, अर्थशास्त्र र भौतिक विज्ञानमा उन्नत डिग्रीसँग एक विज्ञान शिक्षक हुनुहुन्छ। जोहानसनले वाल स्ट्रीट जर्नललाई बताए कि तिनको बटले जानकारीलाई धेरै विश्वसनीय स्रोतहरूबाट स्क्रैप गर्दछ र सँगसँगै सामग्रीहरू समार्छ। प्राय: प्राय: यो सफ्टवेयरले बीटल र तितलीहरू जस्ता साना जनावरहरूको वर्गीकरण सम्बन्धित लेख समावेश गर्दछ। यो पनि फिलिपिन्स को साना शहरहरु र गाँउहरु को कथाहरु लिखने मा सक्षम छ।
जोहानसनको बटको नाम:
जोहानसनको निर्माण लेस्जोबोट भनिन्छ। यो विशेष बट निश्चित रूपमा मानव आकृतिको लागि लेख लेख्नको लागि होइन।.उदाहरणका लागि, एसोसिएटेड प्रेसले घोषणा गरेको छ कि यसले सैकड़ों सामग्री टुक्राहरू लेख्न विशेष रोबोटहरूको प्रयोग गर्नेछ, र विभिन्न समाचार वेबसाइटहरूलाई दैनिक रूपमा समाचार शीर्षकहरू लेख्नका लागि बोटहरू प्रयोग गर्छन्। तिनीहरू मुख्य रूप देखि वित्त र खेलहरु संग सम्बन्धित कथाहरु लाई कवर गर्दछ। विकिपीडियामा, सबै लेखहरूको आधा बटको मद्दतमा सम्पादन गरिएको छ। विकिपीडियाका केही दीर्घकालीन सम्पादकहरू खुशी छैनन् किनभने गैर-मानवले विभिन्न लेखहरू लेखेका छैनन्। यद्यपि, जोहानसनले बोटलाई बचाव गर्दछ र बिन्दुलाई बुझेका छन् कि लेखहरू लेखिएका छन् सही र मार्कमा छन्।
उदाहरणका लागि, लिस्बोटले बेस्सेली, फिलिपिन्सका शहरहरूको बारेमा स्टब लेख लेखेका थिए। जब टाइफून योलान्डले गाँउ र मृत्युको कारणलाई मारेको थियो, धेरै व्यक्तिहरूले स्टबहरूमा भेट्न र धेरै पीडितहरूलाई उद्धार गर्न सक्षम थिए।
Lsjbot कसरि काम गर्दछ?
एक लाख लेख Lsjbot लेखिएको छ र सही हो। यो बोटले विभिन्न स्रोतहरूबाट डेटा संकलन गर्छ र जानकारी दिईएको छ जुन विकिपीडियामा उपयुक्त हुनेछ। बोटले अहिलेसम्म 454,000 लेखहरू सिर्जना गरेको छ, र तीमध्ये आधा स्वीडिश भाषामा छन्। स्वीडिश विकिपीडिया समुदायले लेख बनाउने निर्माण बटहरूको सन्दर्भमा विभिन्न विवादहरूबाट पाठ सिके तर जोहानसनको बटको बारे थप जान्न उत्सुक थियो। स्वीडिश विकिपीडिया सम्पादकले लेखहरूको समीक्षा गरे र लेस्बोटले राम्रो काम गरे। तथापि, यो यो बट विवादास्पद विषयहरू लेख्न अनुमति दिँदैन किनभने Lsjbot मेकेनिकल कुराहरू महसुस गर्न सकेन।
जोहानसनको बटको आलोचना:
धेरै विकिपीडियामा जर्मन विकिपीडियाबाट अचानक रस्किका समेत जोहानसनको बटको आलोचना गरे। उनले वाक्य संरचनाको बारेमा सोधे र लिस्जबोट लामो लेख लेख्न सक्षम भएन। यो बोटले फरक डाटासेटहरू प्रयोग गर्दछ तर केहि पनि लेख्दा विभिन्न प्रामाणिक स्रोतहरू पछाडि छोड्छ। आलोचनाको उल्टो कुरा हो कि लेखका सबै बयानहरूले उचित सन्दर्भहरू समर्थन गर्दैनन्। यसको अर्थ Lsjbot लाई विकिपीडियामा धेरै सन्दर्भहरू थप्न मन लाग्यो। यस बटको साथ, यो धेरै ठूलो लेख सिर्जना गर्न सजिलो हुन्छ। तर हामीले अझै पनि मानव सम्पादकहरू र लेखकहरूलाई चीजहरू स्पष्ट गर्न मद्दत गर्न आवश्यक छ।